कफीले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ कि नोक्सान ? – जीवनशैली
कफीले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ कि नोक्सान ?
Home /स्वास्थ्य/कफीले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ कि नोक्सान ?
धेरै जसो मानिसहरू दिनको सुरुवात बिहान कफी पिएर हुने गर्दछ। किनकि एक कप कफीले तुरुन्त शरीरमा ऊर्जा भरिदिन्छ र तपाईं तन्दुरुस्त महसुस गर्नुहुन्छ। अझ कतिपय मानिस टाउँको दुख्यो भने पनि कफी पिउने गर्छन्। तर के तपाईंले धेरै कफी पिउँदा श्वास्थ्यमा कुनै असर त पर्दैन भन्ने कुराका बारेमा जान्ने कोशिस गर्नुभएको छ?
धेरै कफी पिउँदा मुटु रोगको खतरा
अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिशनमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले धेरै कफी पिउँदा मुटुसम्बन्धी बिरामी हुने खतरा बढी हुने पत्ता लगाएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार दिनमा ६ कपभन्दा बढी कफी पिउने व्यक्तिलाई दिनमा १ वा २ कप कफी पिउने भन्दा २२ प्रतिशत धेरै मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा हुन्छ। यद्यपि यो अरेक व्यक्तिको मेटाबालिक रेटमा निर्भर रहने पनि पत्ता लागेको छ।
कफीले शरीरलाई फाइदा गर्छ कि नोक्सान
केही अनुसन्धानले कफीले फाइदा गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। कतिपय अनुसन्धानले कफिनमा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले दुखाइ, नशासम्बन्धी समस्या, हृदय घातको खतरालाई कम गर्ने बताएका छन्। तर कफीले तपाईंको शरीरलाई फाइदा गर्छ कि नोक्सान भन्ने विषय तपाईंले दिनमा कति कप कफी पिउनुहुन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ।
स्वास्थ रहनका लागि दिनमा कति कफी पिउने
अध्ययनका अनुसार मानिसले सीमित मात्रामा कफी सेवन गर्नुपर्छ। अध्ययनले एउटा व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा पाँच कप कफी पिउँदा ठीक हुने बताएको छ। ६ कप वा त्यो भन्दा बढी कफी पिउँदा मानिसमा मुटुसँग सम्बन्धित समस्या बढ्न सक्ने सम्भवना २२ प्रतिशतले बढी हुन्छ। यदि तपाईं पनि कफीको शोखिन हुनुहुन्छ भने तपाईं दिनमा कति कफी पिउनुहुन्छ त्यो कुराको ध्यान राख्न नभुल्नुहोस्।
नेपाल आइडलका विक्रमको प्रियंकासँग यो कस्तो दूरी (भिडियोसहित)
आज शुक्रबार कस्तो रहला तपाईं दिन हेर्नुहोस् राशिफल